I-7 Amanyathelo okusebenzisa i-IT Skills Framework Hlela | Jonga
New Izakhono ze #IT ziyafuneka ukuba zijongane nokuthotyelwa kokuphuhliswa kwezinto ezintsha, umzekelo, ukulawulwa kwemithombo yolwazi, ukulawula, ukulawulwa kwezinga lokuxhamla, kunye nokunye. Umbuzo uwukuba, "Ngaba nguweAbameli abalungiselele ngokwaneleyo kwaye banelisekile ngokwaneleyo ukukhuthaza ukuthotyelwa, ukuphunyezwa, ukusetyenziswa, nokulawulwa kwezinto ezintsha zokukhula? "
Ukuthumela isakhiwo sezakhono ze-IT akusona isenzo esichukumisayo sengqondo nangona kuthatha uxanduva, ukulungiswa kunye nezinto. Ekugqibeleni, kuya kuba negalelo ekubuyiseni ngokubanzi kwi-mali (ROI) kweshishini. Unokucinga ngale nto njengento efana neendleko ezihambelanayo kunye nokugcina izinto ezintsha. Ubungqina obungasetyenziswanga ekugqibeleni buzisa ukwandiswa iindleko ezipheleleyo zefa (TCO), kusetyenziswe ukusetyenziswa okuphezulu (OPEX) kwaye yehla Isibambiso senani elikhoyo (NPV).
Emva kokucinga ngokubandakanyeka kwam ekusebenziseni nemibutho ye-IT ukuthumela izikhokelo zezakhono ze-IT, ndafaka inqubo kwimigqaliselo eyisixhenxe eyintloko kunye namanqanaba angenako. Into ebalulekileyo yokukhumbula yile nkqubo yenkqubo yokuphendula, oku kuthetha ukuba isenzo asipheli kwisinyathelo sesithandathu. Utshintsho oluqhubekayo ngaphakathi kwintlangano alukhunjulwa. Ngale ndlela, intlangano kufuneka ikwazi ukucinga kwakhona indlela i-IT yokwenza ngayo ubuchule isetyenziselwa ukulungiswa kwisicwangciso esibalulekileyo soshishino. Ngamanye amanqanaba asixhenxe akhulunywa ngenye ingcaciso ephawulekayo phantsi.
Inkqubo yeeNtsuku ezisixhenxe
Inyathelo 1: Misela isicwangciso esibalulekileyo sombutho.
Inyathelo 2: Qonda ukubaluleka kokuba nezakhono ezichanekileyo.
Inyathelo 3: Yenza ukuzinikezela kubonise ukuba yiziphi izakhono ezifunekayo.
Inyathelo 4: Tsonga izakhono ezifunekayo.
Inyathelo 5: Hlola ukulungiswa kwezakhono.
Inyathelo 6: Izixhobo zobuchule beebhanki.
Inyathelo 7: Gcina izakhono ezibalulekileyo.
Okubaluleke kakhulu, ukukhetha isigqibo esundoqo sentlangano yinkcubeko yeshintsho yoshishino. Yintoni imeko yexesha elizayo ishishini lifana? Ziziphi izakhono kufuneka ukuba uncede ushishino lufezekise ikamva layo? Ziziphi iindlelane zamashishini ezilindeleke kwi-IT? Kuqhelekileyo kwimibutho yeembono kunye nokulindela kweeyunithi ezizodwa eziza kutyunjwa kunye ne-IT inhlangano. Isinyathelo sokuqala ngokuphathelele ukucoca ngokucacileyo malunga necandelo eliphambili leshishini.
Ukubaluleka kokuba nezakhono ezichanekileyo kuboniswa ngokuqhuba i-ROI yoshishini, ukuxhasana kunye nokuxhobisa i-IT inxaxheba ekuqiniseni isicwangciso esibalulekileyo soshishino. Ukuba nezakhono ezichanekileyo ngexesha elifanelekileyo libeka i-IT inxaxheba kwindawo yokumkela, ukuhlaziywa nokugcina ubuchule obutsha bokuguqulwa kwezoshishino. Ukuba nezakhono ezichanekileyo malunga nento ngaphandle kwe-IT. Ukuthumela izikhokelo zezakhono ze-IT kufuna abaqeqeshi be-IT ukuba babe nokusebenzisana okungapheliyo kwiiyunithi ezizodwa, baqonde iinjongo zoshishino kunye nobuchule kwaye bazi i-client basekelo kunye nokulindela. Izakhono ezinobunzima, umzekelo, ukuthetha, uxoxiswano, ulawulo lomlingani, ukwandisa ulawulo, kunye nokulawulwa kobudlelwane bamakhasimende, kuphakama ngokubonakalayo kubalulekile.
Xa u thumela Izikhokelo zezakhono ze-IT, ukuzinikezela ukwenza okunjalo kufanele kube khona kuwo onke amanqanaba ombutho ukusuka kuxhaswa ngokusemthethweni kunye neengqungquthela kuzo zonke iindawo ezibandakanyekayo eziza kubakho kwi-action. Into ebalulekileyo yokukhumbula kukuba ukuthumela Isakhono se-IT luququzelelo lwenhlangano kunye nophuhliso lobugcisa kwaye aluyilo linyathelo lokulawula. Ngethuba elide lokuba abantu bafune kwinkqubo bazive benganyanzelwanga ngokuzikhandla, ngoko banqabile ukugxila ekuqinisekiseni ukuphumelela kwayo. Ukuchithwa ngokuthe ngqo kwinto eyenziwa ngenye yeendlela eziphambili zokuphumelela ukuhambisa izikhokelo zezakhono ze-IT. Iibutho zihlala ziqhubela phambili ekutshintsheni izikhokelo zezakhono ze-IT kuba zizama ukunyanzelisa njengezenzo zangaphandle zichasene nokuzilungelelanisa kwimisebenzi yazo yonke imihla. Uhlobo oluphambili lokuphumelela lunikeza abantu ireyithi ethile yexesha labo eliqhelekileyo elenzelwe ukuthumela inkqubo ye-IT.
Le nkqubela idinga ukuthatha i-gander kwiindawo zokuqeshwa ezifunwa ngaphakathi kwintlangano kwiindawo ezahlukahlukeneyo zokusebenza. Ukuqaphela izakhono ezibalulekileyo kuvumela umbutho ukuba uvavanye umgangatho walo okhoyo kwaye useke urhulumente walo. Sonke sazi ukuba izikhundla ezihlukeneyo zengqesho zininzi zifuna izakhono nangona ukuba kule nkqubela kubaluleke kakhulu ukugxininisa kwizakhono eziphambili ezintathu ukuya kwezine. Olu qhubela phambili lujolise kumacandelo omsebenzi, okungafani nakwiisethi zoxanduva. Imibutho rhoqo iqukumbele kwiimeko ezibuhlungu xa zigxila kwiindawo ezikhoyo zengqesho kunye nezigqibo zabantu abangaphakathi kweli candelo. Ukwahlula iindawo zomsebenzi zentsebenzo karhulumente kunye nezakhono kufuneka zichithwe ukusuka kubemi ngokubanzi kule ndawo yengqesho. Izixhobo zokusebenza zingabonakaliswa ukunika indlela engaqinisekiyo kunye neyomeleleyo yokuba abantu bahambe ngokuqala ngezinga elilodwa ukuya kwinqanaba elilandelayo, okanye kwimihla, bahluke kwiindawo ezisebenzayo.
Xa iindawo eziza kusebenza zikarhulumente ziza kubonakaliswa, le migca elandelayo kukuphonononga ukufumaneka kwezakhono kwinani elikhulu labantu abasemhlanganweni. Gcina ingqondweni: le ntshukumo yokuqhubela phambili kwezobugcisa, kungekhona isenzo solawulo lolawulo. Ixhobisa abantu ukuba bahlule izakhono zabo kunye nokubeka isigaba sokuvula ukuqeqeshwa kobugcisa. Ukuhlolwa kwezakhono ezinyanzelisayo kufanele kufake iziqalo zokuqonda ezikwinqanaba ngalinye, ngaphakathi kwendawo yokusebenza jikelele kwaye ekugqibeleni yonke inhlangano ye-IT.
Ngoku abantu banokuphucula ukuphuculwa nokulungiselela izicwangciso ezilungiswe kwizakhono ezibalulekileyo ezifunekayo. Ukuba nokukwazi ukufikelela kwimisebenzi yezakhono ezikhoyo kunceda umbutho ukuba uqonde kakuhle ukuba ukuphuculwa nokuzilolonga kufuneka kuqhutywe njani ukwandisa uqoqosho lwezinga lokuqhubela phambili nokulungiselela izicwangciso zenkcitho. Kwiimeko apho izakhono zifunwa ngokukhawuleza, oku kunceda umbutho ukhetha ukuba yiziphi izakhono ezintsha ezifunyenweyo ngokufumana okanye ukuthenga izivumelwano kubantu abanalo izakhono.
Oku kukuqala kwenkqubo yokubuyisana yokunciphisa umngxuma wezakhono. Njengoko abantu bafumana izakhono ezintsha ngokuqhubela phambili nokuzilolonga, bayazihlola kwakhona. Njengoko utshintsho lwezoshishino luya kuba luleke ngokuqhubekayo kwimibutho, ubuchule babo buya kuphuhliswa ngendlela efanayo kwaye bafune ukuguqulwa ukubuyisela kwakhona isakhiwo sabo, iifom, isakhiwo sombutho, njalo njalo. Ngenxa yoko, le nto idinga ukuqhutyelwa phambili ukuvavanya ukufumaneka kwezakhono eziphambili ze-IT. Xa intlangano iphumelele le nkqubela ekuhambiseni inkqubo yezakhono ze-IT, ininzi yotyalo-mali ithathelwa ngoku.
Imibutho ye-IT kufuneka iqinisekise ukuba izakhono ezichanekileyo ngexesha eligqibeleleyo lokuqinisa ulawulo oluphambili lweshishini. Ukudlulisa inkqubo yezakhono ze-IT inikeza ithuba kwimibutho ye-IT ukugqiba iqondo lokufumaneka kwazo ngokukwahlula apho iindawo zokusebenza zobuchule zikhona kwaye kwakhiwe isakhiwo sokululeka kwezi zimbobo. Njengazo ezintsha, ukugcina inkqubo yezobugcisa be-IT kuya kuqhubeka nokunikela inzuzo kwishishini ngelixa lingagcinanga liza kuphinda lenze igalelo ekukhuleni kwezakhono.
Indlela yokusebenzisa iLinux kwi-Azure, Icandelo II: Iinkcukacha ezingakumbi